ဗုဒ္ဓမိန့်မှာ ကိုယ်ချင်းစာ | မေတ္တာရိပ်
← လူငယ်များအတွက် ဂမ္ဘီရ ၀ိပဿနာ အတွဲ ၁+၂ မှ ကောက်နှုတ်ချက်များ
ဗုဒ္ဓ ပေးသော/ တရားသော အနိုင်ယူနည်း (၄) နည်း →
ဗုဒ္ဓမိန့်မှာ ကိုယ်ချင်းစာ	Posted on June 9, 2009	by mettayate ဗုဒ္ဓက –
သူ့အသက်အား သတ်လိုငြား စဉ်းစားကိုယ်ချင်းစာ၊
သူ့ဥစ္စာအား ခိုးလိုငြား စဉ်းစားကိုယ်ချင်းစာ၊
သူ့သားမယားအား မှားလိုငြား စဉ်းစားကိုယ်ချင်းစာ၊
မမှန်စကား ပြောလိုငြား စဉ်းစားကိုယ်ချင်းစာ၊
ဂုံးချောစကား ပြောလိုငြား စဉ်းစားကိုယ်ချင်းစာ၊
ရိုင်းပြစကား ပြောလိုငြား စဉ်းစားကိုယ်ချင်းစာ၊
ကျိုးမဲ့စကား ပြောလိုငြား စဉ်းစားကိုယ်ချင်းစာ၊
ကိုယ်ချင်းစာတရား ခုနှစ်ပါး စောကြားမြတ်ဗုဒ္ဓါ၊
လိုက်နာကျင့်လျှင် မျက်မှောက်တွင် ပျော်ရွှင်ချမ်းသာ၊
ချမ်းသာကိုရှာ များသူငါ လိုက်နာကျင့်အပ်စွာ။
အညွှန်း ။ ဓမ္မစကြာတရားတော် ပါဠိ+မြန်မာပြန်မှ ကူးယူပါတယ်။
This entry was posted in ဆုံးမသြ၀ါဒများ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← လူငယ်များအတွက် ဂမ္ဘီရ ၀ိပဿနာ အတွဲ ၁+၂ မှ ကောက်နှုတ်ချက်များ